Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Famolavolana ny fizahantany ho an'ny ho avy sy izao tontolo izao: UNWTO Task Force Saudi Style
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • LGBTQ • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Niezaka nanakana izany androany ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, fa ny Fihaonambe UNWTO dia nandray fanapahan-kevitra lehibe miodina amin'ny latabatra rehefa nanangana hery miasa tsy miankina hamolavola ny fizahantany ho an'ny ho avy.
Androany dia nanana mahery fo roa ny fivoriamben'ny UNWTO:
HE Ahmed Al Khateeb, Minisitry ny Fizahantany ho an'ny Fanjakan'i Arabia Saodita
HE Reyes Maroto, Minisitry ny Fizahantany ho an'ny Fanjakan'i Espaina
Omaly, nanana mahery fo iray ny Fihaonambe UNWTO – ny Hon. Gustav Segura Costa Sancho, Minisitry ny Fizahantany ho an'i Costa Rica.
Omaly dia fandresena ho an'ny demokrasia tao amin'ny fivoriamben'ny UNWTO raha tamin'ny fifidianana miafina, ireo solontena avy amin'ny firenena maherin'ny 80 dia nanamafy an'i Zurab Pololikashvili ho sekretera jeneraly mandritra ny 4 taona hafa.
Androany dia fandresena lehibe kokoa ho an'ny demokrasia raha tsy araka ny sitrapon'ny Sekretera jeneraly, ny ho avin'ny Fizahantany Manerantany sy ny UNWTO dia napetraka teo am-pelatanan'ny Task Force vaovao - hetsika natolotr'i Arabia Saodita sy Espaina.
Noresahina tao amin'ny Vaomieram-paritry ny UNWTO ho an'i Afrika ao Cabo Verde ny 2 septambra 2021 ny famantarana voalohany momba izay ao anaty fantsona..
Toy ny omaly, nandresy indray ny demokrasia androany
Nandritra ny fivoriamben'ny UNWTO tany Madrid, dia nankatoavina androany ny tolo-kevitra hanovana ny fizahantany ho an'ny ho avy, natolotry ny Fanjakan'i Arabia Saodita sy Espaina.
Nilaza ny mpitarika ny fizahantany eTurboNews: "Fanovàna lalao ho an'ny sehatry ny fizahantany manerantany."
Ny Sekretera Jeneraly dia nanohitra mafy an'io tolo-kevitra io, satria mametraka ny hoavin'ny hetsika hamolavola indray ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany lavitra ny latabany ary eo am-pelatanan'ny Antenimierampirenena sy ny Filankevitra Mpanatanteraka, eo ambany fitarihan'i Arabia Saodita sy Espaniola.
Zurab Pololikashvili nihevitra fa ampy hanovàna ny hoavin'ny fizahan-tany ny drafitr'izy ireo manokana ary nanentana ny fivoriambe tsy hifidy ny tolo-kevitra Saodiana-Espaniola. Tsy tiany ny Task Force mahaleo tena manokana momba ny fanavaozana ny fizahantany.
Minisitry ny Fizahantany, HE Najib Balala avy any Kenya, Minisitry ny Fizahantany Arabia Saodita HE Mr. Ahmed Al Khateeb, ary ny Minisitry ny Fizahantany ho an'i Jamaika HE Edmund Bartlett dia nitsiky daholo tamin'ity sary nalaina androany ity taorian'ny latsa-bato.
Nankatoavina: Ny Famolavolana ny fizahantany ho an'ny Tafika ho avy
Nanaiky ny solontenan’ny UNWTO, fandresena lehibe ho an’ny fizahantany maneran-tany izany.
Ny areti-mifindra COVID-19 dia naneho, tsy mbola nisy toy izany, ny anjara asa lehibe ara-toekarena sy ara-tsosialy ataon'ny fizahan-tany maneran-tany. Ny fizahan-tany dia mpamily lehibe amin'ny toekarena eran-tany, saingy nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny sehatra maneran-tany ny valan'aretina ary nisy fiantraikany lehibe tamin'ity sehatra lehibe ity, ary nampihena ny soatoavina ara-tsosialy aterany. Asa 62 tapitrisa sy 4 trillion dolara amerikana amin'ny harin-karena faobe no very tamin'ny taona 2020. Mila mandray andraikitra izao tontolo izao mba tsy hiverenan'izany indray ary hamelona indray ity sehatra lehibe ity.
Mba hiverenan'ny sehatra, hiroborobo ary hahazaka ny fikorontanan'ny tontolo iainana amin'ny ho avy, dia mila fiovana, fanoloran-tena ary fampiasam-bola izy mba hahasoa ny olona maneran-tany, indrindra any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Mba hamerenana ny sehatry ny fizahantany misongadina kokoa amin'ny sehatra manerantany, mila fiaraha-miasa iraisam-pirenena lehibe kokoa sy fikambanana iraisam-pirenena omena hery isika. Izany dia hiantoka ny fomba fiasa mitambatra sy mirindra izay mifono ny toetran'ny fizahan-tany mifamatotra sy mifamatotra ary
mampitombo ny fandraisan'anjaran'ny sehatra amin'ny fanatontosana ny tanjon'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana maharitra. Fotoana izao hamolavolana ny fizahantany ho an'ny ho avy amin'ny alàlan'ny fanovana, fanoloran-tena ary fampiasam-bola.
Amin'ny maha-tompon-daka mavitrika amin'ny fizahan-tany mikatsaka ny hiara-hiasa eran-tany miaraka amin'ireo governemanta liana sy orinasa tsy miankina hafa, i Arabia Saodita dia mampiseho ny fanoloran-tenany amin'ny fitarihana ny fiaraha-miasa amin'ny ambaratonga rehetra, fanoloran-tena izay ivon'ny Diriyah Communiqué nosoniavina nandritra ny Fiadidian'ny G20 ao Arabia Saodita tamin'ny taona 2020. , izay manaiky ny anjara asa lehibe ataon’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina eo amin’ny sehatry ny fizahantany.
Tsy vitan'ny hoe manolo-tena i Arabia Saodita, fa vonona ihany koa ny hanome loharano ilaina hanamafisana ny sehatra mifototra amin'ny fitsipiky ny faharetana sy ny fahafahana ho an'ny rehetra, miara-miasa amin'ny andrim-panjakana marolafy. Amin'ny maha mpampiasa vola tokana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny fizahan-tany, i Arabia Saodita dia nanome toky 100 tapitrisa dolara mba hampihetsika ny Tourism Community Initiative amin'ny alàlan'ny Banky Iraisam-pirenena, ho toy ny mpanentana amin'ny fanarenana ny sehatra, amin'ny alàlan'ny fanomezana alalana ireo vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa fananganana fahaiza-manaon'ny olombelona sy andrim-panjakana mba hanaparitahana ny tombontsoa ara-toekarena amin'ny fizahan-tany.
Arabia Saodita dia mpiara-miombon'antoka mavitrika amin'ny UNWTO, manohana ireo hetsika manan-danja ao anatin'izany ny UNWTO Academy sy UNWTO Best Villages Program ary koa ny maha-tranon'ny biraom-paritra UNWTO, izay nisokatra tamin'ny May 2021.
Ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia manolotra tolo-kevitra ho an'ny UNWTO sy ireo mpikambana ao aminy mba hamolavola indray ny fizahantany ho an'ny ho avy miaraka, ao anatin'izany ny fametrahana ny fizahantany fanavaozana ho an'ny tetikasa ho avy. Ity tolo-kevitra ity dia mikendry ny hampiray ny sampan-draharaham-panjakana sy ny sehatra tsy miankina, hanome hery ny fikambanana maro an'isa, ary hampitombo ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpandray anjara mba hiarovana amin'ny fanamby ho avy. Ny Redesigning Tourism for the Future Task Force dia mikendry ny hamelona indray ny UNWTO amin'ny alàlan'ny, inter alia,
mandinika ny fanovana ny fomba fiasan'ny UNWTO amin'izao fotoana izao, sy/na ny fanavaozana hafa an'ny UNWTO.
Ny Famolavolana ny fizahantany ho an'ny Tafika ho avy
Ny Fandrafetana ny fizahantany ho an'ny hery miasa ho avy dia ahitana Fanjakana mpikambana iray nofidin'ny Vaomiera isam-paritra miampy seza iray. Miorina amin'ny fanoloran-tena nasehon'i Arabia Saodita amin'ny fampandrosoana ny sehatra, sy ny tolo-keviny hamolavola ny fizahantany ho an'ny ho avy, ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia manolotra ny tenany hitantana ny Fizahantany Famolavolana ny fizahantany ho amin'ny ho avy.
Ny fanapahan-kevitr'i Espaina sy Arabia Saodita.
Ny Fihaonambe: Nankatoavina ny 2 Desambra 2021 ny fanapahan-kevitra
Nanamarika fa ny Minisitry ny Fizahantany ao amin'ny Fanjakan'i Arabia Saodita, HE Mr. Ahmed Al Khateeb, dia nampahafantarin'ny Sekretera jeneralin'ny Fanjakan'i Arabia Saodita ny soso-kevitry ny fanavaozana ny fizahantany ho an'ny ho avy ary ity tolo-kevitra ity dia ahitana ny fananganana fizahantany fanavaozana ho an'ny fizahantany. Task Force ho avy,
Rehefa nandinika ny vaovao natolotry ny Sekretera jeneraly momba ny tolo-kevitra,
Hita taratra fa mila hetsika izao tontolo izao satria nohamafisin'ny valan'aretina COVID-19 ny maha zava-dehibe ny fizahan-tany ary mbola tsapa ihany koa ny fiatraikany mandrava ny valan'aretina, indrindra any amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana, izay anaovan'ny satan'ny UNWTO fanondroana manokana,
Tsiahivina fa nivelatra sy lehibe ny fiantraikan’ny fizahantany ara-tsosialy eo amin’ny lafiny toekarena. ary tena ilaina ny fiaraha-miasa marolafy mba hanamafisana ny sehatra,
Raha mampahatsiahy fa araka ny andininy faha-12(j) ao amin'ny satan'ny UNWTO, ny Fihaonambe dia afaka manangana sampana ara-teknika na isam-paritra izay mety ho ilaina,
Manaiky ny maha zava-dehibe stratejika ny fiaraha-miasa amin'ny mpikambana UNWTO rehetra momba ny fanalahidy
fandraisana andraikitra amin'ny fanavaozana ny fizahantany ho an'ny ho avy miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanovana, fanoloran-tena,
Manaiky ny maha-zava-dehibe ny fanoloran-tena amin'ny fanavaozana ny fizahantany ho an'ny ho avy
mahasoa ny rehetra;
Mampahatsiahy fa ny Fanjakan'i Arabia Saodita amin'izao fotoana izao dia mampiantrano biraom-paritry ny
UNWTO any Riyadh, Fanjakan'i Arabia Saodita;
Manapa-kevitra ny hanangana hery miasa ao amin'ny UNWTO antsoina hoe Redesigning
Fizahantany ho an'ny Tafika ho avy;
Nanapa-kevitra ny handidy ny Famolavolana ny fizahantany ho an'ny hery miasa ho avy ao
mifanaraka amin'io tolo-kevitry ny Fanjakan'i Arabia Saodita io;
Manapa-kevitra fa ny didy avy amin'ny Redesigning Tourism for the Future Task Force dia hanao izany
mitohy mandra-pahatongan'ny fivoriana faha-26 amin'ny Fihaonambe ary havaozina ho azy raha tsy misy fanapahan-kevitra hafa ataon'ny ankamaroan'ny Firenena Mpikambana feno manatrika sy mifidy;
Manapa-kevitra fa hisy ny Fandrafetana ny fizahantany ho an'ny Task Force ho avy
Fanjakana mpikambana iray nofidin’ny Vaomiera isam-paritra miampy seza iray. lf a
Ny Vaomieram-paritra dia tsy nanondro ny mpikambana ao amin'ny Task Force amin'ny faran'ny telovolana voalohany amin'ny 2022, avy eo ny filoha dia manasa Fanjakana mpikambana ao amin'io faritra io.
Vaomiera hanatevin-daharana ny Task Force;
Manendry ny Fanjakan'i Arabia Saodita ho filohan'ny Fizahan-tany Redesigning ho an'ny
Tafika ho avy;
Manome alalana ny Fandrafetana ny fizahantany ho an'ny Tafika ho avy handray ny fitsipiny manokana
ny fomba fiasa araka izay ilaina;
Manentana ny Fandrafetana ny fizahantany ho an'ny Tafika ho avy hanomboka ny asany amin'ny maha-
haingana araka izay azo atao ary tsy mihoatra ny faran'ny telovolana voalohany amin'ny 2022;
Manasa ny Fandrafetana ny fizahantany ho an'ny Tafika ho avy handefa tatitra sy
tolo-kevitra tsindraindray amin'ny Filankevitra mpanatanteraka sy ny Fihaonambe,
araka izay heveriny fa mety.
l. Soso-kevitra hanovana ny fizahantany ho amin'ny ho avy
Tamin'ny alalan'ny taratasy tamin'ny 25 Oktobra 2021, ny Minisitry ny Fizahantany ao amin'ny Fanjakan'i Arabia Saodita, HE Mr. Ahmed Al Khateeb, dia nampahafantatra ny Sekretera jeneralin'ny tolo-kevitry ny Fanjakan'i Arabia Saodita hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena amin'ny fanavaozana ny fizahantany. hampivondrona ny sehatra ho an'ny daholobe sy tsy miankina, hanome hery ny fikambanana maro an'isa ary hampitombo ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpandray anjara mba hiarovana amin'ny fanamby amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny fepetra isan-karazany, ao anatin'izany ny fametrahana ao anatin'ny UNWTO vondron'asa iray hamolavola ny fizahantany ho an'ny ho avy (ny "Redesigning Tourism for the Future Task". Force”).
Ny dika mitovy amin'ny taratasy dia ampifandraisina amin'ity antontan-taratasy ity ho an'ny Annex l.
Noho ny fangatahan'ny Fanjakan'i Arabia Saodita, ny Sekretera jeneraly dia manolotra ity tolo-kevitra ity amin'ny fanavaozana ny fizahantany ho an'ny ho avy ao anatin'izany ny fametrahana ny Famolavolana ny fizahan-tany ho an'ny asa ho avy, ho fanapahan-kevitry ny fivoriamben'ny UNWTO, mifanaraka amin'ny fitsipika 38. (1) sy ny 40 amin'ny Fitsipika momba ny Fivoriambe.
II. Ny ilana hetsika
Ny fizahan-tany dia mpamily lehibe amin'ny toekarena eran-tany, fa ny valan'aretina COVID-19 dia nisy fiantraikany ratsy teo amin'izao tontolo izao ary nisy fiantraikany lehibe tamin'ity sehatra lehibe ity, ary nampihena ny soatoavina ara-tsosialy aterany. Asa 62 tapitrisa, ary 4 trillion USD amin'ny GDP isan-taona no very tamin'ny 2020. Nijaly avokoa ny firenena rehetra. Saingy nihena tsy mitovy amin'ny tany an-dalam-pandrosoana izany fiantraikany izany.
Ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia manaiky fa ny politika manerantany amin'izao fotoana izao dia tsy maneho ny maha-zava-dehibe ny sehatry ny fizahantany ary fotoana izao hanovana izany. Ny fizahan-tany no tena mitondra ny toekarena manerantany. Talohan'ny nisian'ny areti-mifindra, 10.4% amin'ny harin-karena eran-tany dia novokarin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany ary asa vaovao 1 amin'ny 4 no noforonin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Ny areti-mifindra dia nisy fiantraikany ratsy nanerana izao tontolo izao ary nisy fiantraikany lehibe tamin'ity sehatra lehibe ity, ary nampihena ny soatoavina ara-tsosialy aterany.
Mba hiverenan'ny sehatra, hiroborobo ary hahazaka ny fikorontanan'izao tontolo izao amin'ny ho avy, dia mila fiovana, fanoloran-tena ary fampiasam-bola izy mba hahasoa ny olona maneran-tany, indrindra fa any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Mba hamerenana ny sehatry ny fizahantany misongadina kokoa amin'ny sehatra manerantany, mila fiaraha-miasa iraisam-pirenena lehibe kokoa sy fikambanana iraisam-pirenena omena hery isika.
Izany dia hiantoka ny fomba fiasa mitambatra sy mirindra kokoa izay mifikitra amin'ny toetran'ny fizahantany mifamatotra sy mifamatotra ary mampitombo ny fandraisan'anjaran'ny sehatra ho an'ny tanjon'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana maharitra.
III. Didim-pitondrana ny fizahantany fanavaozana ho an'ny hery miasa ho avy
Mba hamahana ireo voalaza etsy ambony ireo, ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia manolotra ny UNWTO hanangana ny fizahantany fanavaozana ho an'ny asa ho avy.
Ny Fandrafetana ny fizahantany ho an'ny Tafika ho avy dia tsy maintsy:
i. hamelona indray ny UNWTO amin'ny alalan'ny, inter alia, amin'ny fandinihana ny fanovana ny UNWTO
fomba fiasa ankehitriny, ary koa ny fametrahana programa nohatsaraina sy
fandraisana andraikitra, mba hahazoana antoka fa ny UNWTO dia afaka manome ny filana efa misy sy ho avy
ny sehatry ny fizahantany, indrindra amin’ny fifandraisan’ny tany an-dalam-pandrosoana;
ii. mandray fepetra raisina mamaly ny antso manerantany ho an'ny UNWTO izay
manome ireo firenena mpikambana ao aminy programa sy hetsika nohatsaraina ara-pitaovana, izany
afaka manatanteraka miaraka amin'ny vokatra azo tsapain-tanana sy azo refesina izay
natao hanompoana ny ho avy, izay mamaly ny filan'ny firenena mpikambana rehetra
anisan'izany ireo firenena an-dalam-pandrosoana ary mifanaraka amin'ireo andry telo lehibe amin'ny Redesigning
Fizahantany ho an'ny ho avy: faharetana, faharetana ary firaisankina; SY
iii. mamporisika sy miantoka ny fandraisan'anjaran'ireo mpandray anjara tsy miankina amin'ny Fanjakana
ny fanavaozana ny sehatry ny fizahantany maneran-tany.
Mifanaraka amin'ny tanjon'ny UNWTO sy ny tanjon'ny Fizahantany ho an'ny ho avy io didy io.
Mba hahazoana antoka fa afaka manome fahafaham-po ny fizahan-tany Redesigning ho an'ny Task Force ho avy
dia hitohy mandra-pahatongan'ny fivoriana faha-26 (ara-dalàna) an'ny Fivoriamben'ny UNWTO farafaharatsiny. Havao ho azy ny didy hitsivolana Fanitsiana ny fizahantany ho an'ny Force Task Force ho avy, raha tsy hoe fanapahan-kevitry ny ankamaroan'ny Firenena Mpikambana feno manatrika sy mifidy.
IV. Arabia Saodita: Miantso hamolavola ny hoavin'ny fizahantany miaraka
Amin'ny maha tompon-daka mavitrika amin'ny fizahan-tany, i Arabia Saodita dia mampiseho ny fanoloran-tenany amin'ny fitarihana ny fiaraha-miasa amin'ny ambaratonga rehetra, fanoloran-tena izay ivon'ny Diriyah Communiqué nosoniavina nandritra ny Fiadidiana G20 an'i Arabia Saodita tamin'ny taona 2020, izay manaiky ny anjara asa lehibe ataon'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy tsy miankina amin'ny fanjakana. sehatry ny fizahantany.
Arabia Saodita dia mpiara-miombon'antoka mavitrika amin'ny UNWTO, manohana ireo hetsika manan-danja ao anatin'izany ny UNWTO Academy sy UNWTO Best Villages Program ary koa ny maha-tranon'ny biraon'ny faritra UNWTO nosokafana tamin'ny Mey 2021.
Amin'ny maha mpampiasa vola tokana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny fizahan-tany, i Arabia Saodita dia nanome toky 100 tapitrisa dolara hampihetsika ny Tourism Community Initiative amin'ny alàlan'ny Banky Iraisam-pirenena ho toy ny mpanentana amin'ny fanarenana ny sehatra amin'ny alàlan'ny fanomezana alalana ireo vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa fananganana fahaiza-manaon'olombelona sy andrim-panjakana mba hampielezana ny tombontsoa ara-toekarena amin'ny fizahantany.
Ny fanjakan'i Arabia Saodita dia nahomby tamin'ny andraikitry ny mpitarika ao amin'ny UNWTO.
Ho fanampin'ny fampiantranoana biraom-paritry ny UNWTO, tamin'ity taona ity ny Fanjakana Arabia Saodita dia niara-nikarakara ny Fivorian'ny Komitin'ny Krizy Maneran-tany momba ny fizahantany an'ny UNWTO, ary koa ny fivoriana faha-47 an'ny Vaomieram-paritry ny UNWTO ho an'ny Afovoany Atsinanana. Ny Fanjakan'i Arabia Saodita koa dia niasa tao amin'ny komity sy taova maromaro ao amin'ny UNWTO, anisan'izany ny maha filoha lefitry ny filankevitra mpanatanteraka ankehitriny.
Ao anatin'ny fanoloran-tena nasehon'izy ireo amin'ny fanavaozana ny fizahantany ho an'ny ho avy, ny Fanjakan'i Arabia Saodita dia nanolotra ny hitantana ny fizahantany fanavaozana ho an'ny tetikasa ho avy.
fananganana indray UNWTO
saadd rehman hoy:
Desambra 6, 2021 amin'ny 11:17
Lahatsoratra tsara tarehy sy tsara nosoratana, tena ilaina sy mahasoa. Alefaso foana ny votoaty sarobidy toy izao!
fanorana amin'ny mississauga